နေ့စဉ်အိမ်မှုကိစ္စများနဲ့ ချစ်စရာ အိမ်ဦးနတ်လေးတွေရဲ့ ရယ်မောဖွယ်ရာအလွဲများ။ – SoShwe
Home/Other/Funny/နေ့စဉ်အိမ်မှုကိစ္စများနဲ့ ချစ်စရာ အိမ်ဦးနတ်လေးတွေရဲ့ ရယ်မောဖွယ်ရာအလွဲများ။
နေ့စဉ်အိမ်မှုကိစ္စများနဲ့ ချစ်စရာ အိမ်ဦးနတ်လေးတွေရဲ့ ရယ်မောဖွယ်ရာအလွဲများ။
So Shwe February 18, 2022	Funny Leaveacomment
အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ချစ်ဇနီးလေးတွေအတွက် အိမ်မှုကိစ္စတွေ ဝိုင်းမကူခင်မှာ အိမ်မှုကိစ္စတွေဟာ လွယ်ကူတယ်လို့ ထင်မှတ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အမှားအယွင်းမျိုးတွေကို အိမ်ဦးနတ်များက ကျူးလွန်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အဝတ်တွေကို အခြောက်ခံစက်ထဲမထည့်ခင် အညစ်ကြေးစစ်ဇကာကို အရင်ဦးဆုံး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရမည်ကို မသိသူ။
My husband does many things well. Cleaning out the lint tray, is not one of them. #laundry #husbandfail
A post shared by Kristen Flowers (@accordingtokristen) on Apr 24, 2018 at 5:54pm PDT
၂။ အစွန်းအထင်းတွေပေနေတဲ့နံရံကို ပြန်ပြီးအရောင်တင်ရာမှာ မတူညီတဲ့အရောင်အသစ်ကို အသုံးပြုမိတဲ့ အမျိုးသား။
This kind of shit happens when I am working… he wanted to suprise me by painting over the little stains. Well now we have big stains instead but he surely surprised me… #MyHusbandIsAKid #MyHubbyIsColorBlind
A post shared by eliseaugarde (@eliseaugarde) on Aug 27, 2018 at 1:24pm PDT
၃။ မွေးနေ့ကိတ်ပေါ်မှာ စာသားလေးတွေနဲ့ ပုံဖော်ရမည်ဆိုတာကို မသိသူ။
၄။ အမဲသားချောင်းအထုပ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဖွင့်လို့ရမှန်းမသိတဲ့ အမျိုးသား။
My husband decided to open our hotdogs like THIS #canceled pic.twitter.com/6qzXCcySsE
— Martie (@MartieShockley) November 8, 2018
၅။ အာလူးကြော်အိတ်ကိုဖွင့်ပြီး ဘယ်လိုပြန်ပိတ်ရမလဲဆိုတာကို မသိသူ။
I can’t decide if this deserves an A for effort…oraD for effort. 🤦🏼‍♀️ At least he tried—ish? #soclose #husbandfail #cmonmama #cmondada #men
A post shared by C’MON MAMA® (@cmon.mama) on Nov 15, 2017 at 6:44pm PST
၆။ ရေခဲမုန့်ဘူးကို ရေခဲသေတ္တာ အခဲခန်းမှာထားရမည်ကို မသိသူ။
Something is wrong here. Sigh. Husband failed at putting my ice cream in the freezer. He got the case of the “pregnancy brain.” #husbandfail #forgetful #theregoesmybenandjerrys #sadday #ripicecream #itwasstillfull
A post shared by Xy-Luna-Maze (@xy_luna_maze) on Mar 23, 2018 at 3:28am PDT
၇။ ဂျယ်လီကို ရေခဲသေတ္တာထဲက အခဲခန်းမှာမထားသင့်တာကို မသိတဲ့ အမျိုးသား။
Apparently the jello is really hard when you put it in the freezer instead of the fridge….. #husbandfail
A post shared by Brandi (@mrs_bmeyer) on Jul 28, 2018 at 8:56pm PDT
၁၀။ ကော်ဖီနှစ်ခွက်ကို အပူပေးဖို့အတွက် အပူပေးစက်ထဲမှာ ၄၆ မိနစ်အထိ ထားခဲ့တဲ့အမျိုးသား။
This is too long for re-heating2cups of coffee. #2ndTimeThisYear #HusbandFail
A post shared by Rhonny Dam (@rhonnydef) on Dec 11, 2016 at 6:44am PST
၁၀။ လက်ဆောင်ကိ အလှစက္ကူကပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးကို ကပ်ဖို့လိုကြောင်း မသိတဲ့ အမျိုးသား။
၁၁။ သန့်စင်ခန်းထဲမှာ အသုံးပြုတဲ့ ပရိဘောကပစ္စည်းတွေဟာ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ မထားသင့်ကြောင်း မသိတဲ့ အမျိုးသား။
Wife said the kitchen needed more counter space. Turns out this isn't what she meant #husbandfail pic.twitter.com/sl5d8z3PUf
— Daniel Eslinger (@RDODanielE) January 7, 2015
၁၂။ မုန့်ဖုတ်စက်ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမှန်းမသိတဲ့ အမျိုးသား။
When you attemptanice 'welcome home' breakfast for your wife and turn the oven to grill instead of fan… #husbandfail pic.twitter.com/GwiaVJS5Ov
— Jack Palmer-White (@jackpalmerwhite) December 17, 2016
၁၃။ အဝတ်အစားတွေကို လျှော်စက်ထဲမထည့်ခင်မှာ အဝတ်အစားတွေရဲ့အိတ်တွေကို ရှင်းလင်းရမည်ကို မသိတဲ့ အမျိုးသား။
And *THIS * is why I can't trust my husband to putaload of washing going … #husbandfail pic.twitter.com/r6iLnmUPJn
— Sam Carrington (@sam_carrington1) April 3, 2019
၁၄။ အဝတ်လျှော်တဲ့အခါမျိုးမှာ ဆပ်ပြာမှုန့်ပမာဏနဲ့ အဝတ်ရဲ့အချိုးအစားကို မတိုင်းဆတတ်တဲ့အမျိုးသား။
Oops. Too much soap!!! 🤣🤦‍♂️#husbandfail #fail
A post shared by Jonathan Bishop (@therevbishop) on Oct 18, 2019 at 3:32am PDT
၁၅။ ဝိုင်ပုလင်းအဖုံး ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာကို မသိရှိတဲ့အမျိုးသား။
Asked the wife if she wanted me to open this bottle of wine she got yesterday. I thought the cork wasalittle too easy, 🤦🏽‍♂️turns out it was twist off. Oops. pic.twitter.com/IPMCP6xQdU
— Dave B (@pdaveb) December 25, 2019
၁၆။ အိမ်သာသုံးစက္ကူချိတ်တဲ့ချိတ်ပေါ်မှာ အိမ်သာသုံးတစ်ရှူးကိုချိတ်ဖို့ အာရုံမရတဲ့အမျိုးသား။
Please, man-explain this to me? #HusbandFail
A post shared by Renee Hackney (@reneehsckney) on Jan 16, 2020 at 8:22pm PST
၁၇။ စားပြီးသားပန်းကန်တွေကို ပန်းကန်ဆေးစက် ဒါမှမဟုတ် ဘေစင်ပေါ်တင်ရမည်ဆိုတာကို မသိရှိတဲ့ အမျိုးသား။
၁၈။ နေလောင်ကာခရင်မ် လိ်မ်းပုံလိမ်းနည်းကို မသိရှိတဲ့ အမျိုးသား။
When you let your husband spray you with sunscreen… wtf? #whatthefuck #husbandfail #aninterestingtanline #cleaveage
A post shared by Lisa (@lisahuf1) on Jun 16, 2018 at 3:25pm PDT
၁၉။ ကြမ်းသုတ်တံမြက်စည်းဟာ ကြမ်းပြင်ကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာမှာသာ သုံးသင့်ကြောင်း မသိသူ။
ေန႕စဥ္အိမ္မႈကိစၥမ်ားနဲ႕ ခ်စ္စရာ အိမ္ဦးနတ္ေလးေတြရဲ႕ ရယ္ေမာဖြယ္ရာအလြဲမ်ား။
အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႕ သူတို႔ရဲ႕ခ်စ္ဇနီးေလးေတြအတြက္ အိမ္မႈကိစၥေတြ ဝိုင္းမကူခင္မွာ အိမ္မႈကိစၥေတြဟာ လြယ္ကူတယ္လို႔ ထင္မွတ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အမွားအယြင္းမ်ိဳးေတြကို အိမ္ဦးနတ္မ်ားက က်ဴးလြန္မိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
၁။ အဝတ္ေတြကို အေျခာက္ခံစက္ထဲမထည့္ခင္ အညစ္ေၾကးစစ္ဇကာကို အရင္ဦးဆံုး သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရမည္ကို မသိသူ။
၂။ အစြန္းအထင္းေတြေပေနတဲ့နံရံကို ျပန္ၿပီးအေရာင္တင္ရာမွာ မတူညီတဲ့အေရာင္အသစ္ကို အသံုးျပဳမိတဲ့ အမ်ိဳးသား။
၃။ ေမြးေန႔ကိတ္ေပၚမွာ စာသားေလးေတြနဲ႕ ပုံေဖာ္ရမည္ဆိုတာကို မသိသူ။
၄။ အမဲသားေခ်ာင္းအထုပ္ကို လြယ္လြယ္ကူကူ ဖြင့္လို႔ရမွန္းမသိတဲ့ အမ်ိဳးသား။
၅။ အာလူးေၾကာ္အိတ္ကိုဖြင့္ၿပီး ဘယ္လိုျပန္ပိတ္ရမလဲဆိုတာကို မသိသူ။
၆။ ေရခဲမုန္႔ဘူးကို ေရခဲေသတၱာ အခဲခန္းမွာထားရမည္ကို မသိသူ။
၇။ ဂ်ယ္လီကို ေရခဲေသတၱာထဲက အခဲခန္းမွာမထားသင့္တာကို မသိတဲ့ အမ်ိဳးသား။
၁၀။ ေကာ္ဖီႏွစ္ခြက္ကို အပူေပးဖို႕အတြက္ အပူေပးစက္ထဲမွာ ၄၆ မိနစ္အထိ ထားခ့ဲတ့ဲအမ်ိဳးသား။
၉။ လက္ေဆာင္ကိ အလွစကၠဴကပ္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခုလံုးကို ကပ္ဖို႔လိုေၾကာင္း မသိတဲ့ အမ်ိဳးသား။
၁၀။ သန္႔စင္ခန္းထဲမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ပရိေဘာကပစၥည္းေတြဟာ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွာ မထားသင့္ေၾကာင္း မသိတဲ့ အမ်ိဳးသား။
၁၁။ မုန္႔ဖုတ္စက္ကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳရမွန္းမသိတဲ့ အမ်ိဳးသား။
၁၂။ အဝတ္အစားေတြကို ေလွ်ာ္စက္ထဲမထည့္ခင္မွာ အဝတ္အစားေတြရဲ႕အိတ္ေတြကို ရွင္းလင္းရမည္ကို မသိတဲ့ အမ်ိဳးသား။
၁၃။ အဝတ္ေလွ်ာ္တ့ဲအခါမ်ိဳးမွာ ဆပ္ျပာမႈန္႔ပမာဏနဲ႕ အဝတ္ရဲ႕အခ်ိဳးအစားကို မတိုင္းဆတတ္တ့ဲအမ်ိဳးသား။
၁၄။ ဝိုင္ပုလင္းအဖံုး ဘယ္လိုဖြင့္ရမလဲဆိုတာကို မသိရွိတ့ဲအမ်ိဳးသား။
၁၅။ အိမ္သာသံုးစကၠဴခ်ိတ္တဲ့ခ်ိတ္ေပၚမွာ အိမ္သာသံုးတစ္ရွဴးကိုခ်ိတ္ဖို႔ အာ႐ံုမရတဲ့အမ်ိဳးသား။
၁၆။ စားၿပီးသားပန္းကန္ေတြကို ပန္းကန္ေဆးစက္ ဒါမွမဟုတ္ ေဘစင္ေပၚတင္ရမည္ဆိုတာကို မသိရွိတ့ဲ အမ်ိဳးသား။
၁၇။ ေနေလာင္ကာခရင္မ္ လိ္မ္းပုံလိမ္းနည္းကို မသိရွိတ့ဲ အမ်ိဳးသား။
၁၈။ ၾကမ္းသုတ္တံျမက္စည္းဟာ ၾကမ္းျပင္ကို သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရာမွာသာ သံုးသင့္ေၾကာင္း မသိသူ။
Previous ကမ္ဘာမြေပေါ်က အကြီးမားဆုံးသော အပင်မျိုးစိတ်များနဲ့ တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ။
Next နာတာရှည် Covidရောဂါနဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများ။
အရပ်ရှည်တဲ့သူတွေ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ဒုက္ခတွေကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘယ်နေရာသွားသွား သူများတွေထက် အရပ်ပိုရှည်နေတာကြောင့် လူအများက ငေးကြည့်တာကို ခံရမယ်။ အခန်းတစ်ခန်းထဲ ဝင်သွားတဲ့အခါမှာလည်း အခန်းတံခါးထက် အရပ်ကရှည်နေတာကြောင့် …